Ugu | Onye ọrụ ubi na-elekọta anụ ọhịa | February 2020
Ụzọ m ga-esi gbazee ugu n'ụlọ
Ugu bu ihe di nma ma obu ihe di nma, nke di nma ma chekwaa ya n'ulo, n'arughi odidi mbu ya na otutu ihe bara uru. Ị nwere ike ịchekwa otu ugu n'ime okpuru ulo gbara ọchịchịrị na okpomọkụ nke + ogo 15 ma ọ bụ kpoo ya - nke a bụ ụzọ nchekwa dị nnọọ mma. Ma ụzọ kachasị ewu ewu maka owuwe ihe ubi pumpkins maka oyi bụ na-na.
Beninkaz ma ọ bụ gọọd gọọmentị - onye na-enwupụta nke ezinụlọ ugu. A na-akọkarị na Indonesia, China, Latin America. Otú ọ dị, beninkaz bụ osisi na-adịghị mma, n'ihi ya, a pụrụ ịkọ ihe ubi ya n'ebe ndị ọrụ ubi nọ na mbara igwe anyị. Ị ma? Ndị na-agwọ ọrịa Chinese na-eji akwukwo nri mee ọtụtụ ọrịa.
Nkọwapụta na foto nke iche iche ugbo sieum
Ihe na-adịghị emepụta pumpkins anaghị eme: larịị ma gbaa gburugburu, na-acha odo odo na odo odo, na-acha anụnụ anụnụ na nke akpọrọ akpụ, n'ụdị nnukwu akpa na serpentine. Ụdị dịgasị iche iche nke ihe oriri a dị nnọọ ịtụnanya, ọ na-esikwa ndị na-elekọta ubi ike ike ịhọrọ. Uzo esi acho oke ugu, ihe di iche iche na ihe di iche iche, anyi ga-agwakwa n'isiokwu a.
Bara uru ma na-agwọ ọrịa Njirimara nke ugu
Ugu bu ewu ewu na otutu mba. O toro site n'oge ochie. Ọtụtụ osisi a na-ahụ maka nlekọta na-atụghị anya ya na owuwe ihe ubi bara ụba. N'otu oge ahụ, osisi ahụ nwere ọtụtụ ọgwụ ọgwụ. Site n'isiokwu a, ị ga-amụta ihe ndị na-edozi mkpụrụ bụ mkpụrụ osisi, bụ ihe ugbo nwere ọgwụgwọ akụrụngwa na ịjụ ọgwụ maka iji.
Ndepụta nke ọtụtụ ụdị lagenaria (aha na foto)
Taa, anyị ga-ewebata gị na Lagenariya. N'isiokwu a, ọ bụghị naanị na ị nwere ike ịgụta ihe dị mma banyere lagenariya, ma hụkwa ụdị osisi dị iche iche na foto ahụ. Osisi Lagenaria bụ nke ezinụlọ Pumpkin, dị ka mkpụrụ nke ọdịbendị na-egosi. Ọ bụ osisi lianoid nke na-eto na ogbe.
Ọnọdụ nchekwa maka pumpkins na oyi, otu esi echekwa inine ruo mgbe mmiri
Taa, ọnụ ọgụgụ buru ibu dị iche iche nke ugu, onye ọ bụla nwere ike ịhọrọ iri nke ụdị dị iche iche na-eto eto. Ajụjụ a bụ maka nchekwa nke mkpụrụ osisi a dị ụtọ ma dị mma. Ogologo oge na n'ọnọdụ ndị dị aṅaa ka a ga-echekwa ya, ụdị dị iche iche kachasị mma maka nke a - anyị ga-ahụ n'isiokwu a. Kedu ụdị ugu kachasị mma maka nchekwa Ndị na-elekọta ndị ọkachamara na-akpọ ndị na-esote ndị a kachasị mma ma gbanwee maka nchekwa nchekwa oge dị iche iche: "Kherson".
A na-amata ugu ma mara ọtụtụ. Ugu soups, casseroles, ọka, pancakes na pancakes - niile efere ma ghara depụta. Anyị na-enye gị ụfọdụ ntụ ọka ndị dị ebube na ugu, ya bụ ugu muffins. Njirimara bara uru nke ugu A maara na ndị India si South America malitere itolite ugu ihe dịka puku afọ ise gara aga, na narị afọ nke iri na isii, a kpọbatara ya n'ókèala nke Alaeze Ukwu Russia.
Mkpụrụ mmanụ mkpụrụ vaịn: ihe dị mma na ihe ọ na-emeso, otu esi eji ma jiri
Mmiri mmanu nwere ọtụtụ ihe ndị dị oké mkpa maka ahụ mmadụ. A na-enweta ngwaahịa a site na akwukwo nri site na ịpị oyi. N'iji nlezianya bia, ngwaahịa ahụ na-ejide vitamin na mineral ndị kasị baa uru. Dika ngbachapu ya, enwere oji mmiri dika ocha na agba ocha nke nwere odo odo; n'oge ochie ana akppo ya "odo odo".
Nri ugu compote: Ezi ntụziaka maka oyi
Ọ bụrụ na ị rịọ onye okenye ma ọ bụ nwa ọ bụla ka ọ bụrụ onye na-ede akwụkwọ, ị ga-anụ nzaghachi na mkpụrụ osisi na tomato. Ma cheedị na a ga-esi na akwụkwọ nri na-esi nri, na ihe kacha mma ha bụ ugu. Gbalịa ya - ma eleghị anya a ga-etinye ihe ọṅụṅụ a na menu gị dịka otu n'ime ndị a hụrụ n'anya.